Modern Aluminium မှ service များ - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 369 view counts
Brand : GreatModern
လုပျငနျးအမညျ : MODERN ALUMINIUM Design & Decoration Services Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 095138393,095173101,09788500059,01293846
Desgin : Modern
Fixed Glass : 12mm
Tempered Door : 12mm
Apply : showroom . Bank .hospital . International school .Gas Shop.coffee shop.shopping mall
Modern Aluminium မှ
ဆိုင်ခန်း.ရုံးခန်း .showroom . Bank .hospital . International school .ဆီဆိုင်.coffee shop.shopping mall.စသည့်လုပ်ငန်းများ၏မျက်နှာစာအား Aluminium. Glass .Composite များဖြင့်တာဝန်ယူ အလှဆင်ပေးနေပါပြီ...
Design မရှိလျှင် Design ဆွဲပေးပြီး.
Design ရှိလျှင် အဆိုပါ Design အတိုင်းထွက်အောင် Decoration လုပ်ပေးနေပါပြီ...
၂.လူကြီးမင်းတို့ ၏ structure buildingများနှင့်အဆောက်အဦဟောင်းများကိုလည်း modernize design ဖြစ်သွားအောင် Aluminium. Glass.Composite များဖြင့် အချိန်တို
3.Curtain wall work.
4.Fixed glass work.
6.12mm Fixed glass.
7.12mm Tempered doors ...စသည့် Aluminium လုပ်ငန်းများဖြင့်လည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ....
No .62.leikkan st.pzd tsp.near yae kyaw st.
လူကြီးမင်းတို့၏ ဆိုင်ခန်း၊ရုံးခန်း၊ဓါတ်ဆီဆိုင်၊ Office,Showroom, Shop House, Hotel international school, Car Showroom စသည့်လုပ်ငန်းများ၏ မျက်နှာစာအား (Alumiinium+Glass+Composite)များဖြင့် အလှဆင်လိုပါသလား?ကျွန်တော်တို့ Modern Aluminium Design & Decoration Service မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ကျွန်တော်တို့ Company မှ Design & Decoration လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အလှဆင်ထားသော Site များမှာ AGD Bank, Auto Life Car Service Centre, Brain Work International School (Taunggyi), Horizon International School, Hotel 7Miles, Hyundai Car Showroom(Thamine Juncction), Mec Project, Nibban Showroom, Pwint Thit San Food Center, Sayar Myint Factor & ZTH Oil Station (Nay Pyi Daw)တို့ကို အလှဆင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသည်။
Renovation လုပ်ငန်းအနေဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ အဆောက်အဦးဟောင်းများကို ဖြိုချဖျက်ပစ်စရာ မလိုပဲ အဆောက်အဦးအသစ်အသွင် Composite များဖြင့် အလှဆင်ကူးပြောင်းလိုပါသလား? Renovation လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အလှဆင်ထားသော Site များမှာ - Lotteria Shop, Marry Brow Fried Chicken Shop (Shwe Gone Daing), Nine Naing Iron Shop (Saw Bwar Gyi Gone) တို့ကို ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့် ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသည်။
Contract Building & Project Building များအား Composite + Curtain Wall များဖြင့် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်လိုပါသလား ? Contract Building & Project Building လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အလှဆင်ထားသော Site များမှာ - 6th st site, Hotel Kant Kaw(Ahlone Tsp), Ko Tun Oo Site (North Okka Lar), Pyi Myanmar San Construction, Sin Ma Lite Market(Kan Nar Rd), Tet Lan Construction( 19ths st), Tet Lann Construction(23th St), Tet Lan Construction ( Lan Ma Daw Street), Upper Paung Laung Project(Nay Pyi Daw), Win Thitsar Construction (San Chaung), Yangon General Hospital တို့ကို အလှဆင် တည်ဆောက်ထားသည်။
Aluminium Work အနေဖြင့် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင်ရွက်လိုပါသလား? Aluminium Work လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အလှဆင်ထားသော Site များမှာ - 12mm Fixed & 12mm Tempered Doors, Hydraulic Doors, Keller Windows,Partition work, Sliding Windows တို့ဖြစ်သည်။
For Modern Aluminium မှ service များ
May I get the quotation for "Modern Aluminium မှ service များ " ?